Real Estate Zvinyorwa Kutengesa uye Kubhadhara muLong Island, New York
Long Island (munharaunda:) chitsuwa chine vanhu vazhinji kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwenyika yeUS kuNew York, kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweUnited States. KuNew York Harbour ingangoita mamaira 0.35 (0.56 km) kubva kuManhattan Island uye inosvika kumabvazuva kupfuura mamaira zana (160 km) kupinda muAtlantic Ocean. Chitsuwa ichi chine matunhu mana; MaMadzimambo neQueens matunhu (madhorobha eNew York City eBrooklyn neQueens, zvichiteerana) uye Nassau County inogovera chikamu chekumadokero chechitatu chechitsuwa ichi, nepo Suffolk County inogara kumabvazuva kwezvitatu. Inopfuura hafu yevagari veNew York City vanogara kuLong Island, muBrooklyn uye muQueens. Zvisinei, vanhu vazhinji vari muNew York metropolitan nzvimbo (kunyangwe muBrooklyn neQueens) vanoshandisa izwi rekuti Long Island (kana kuti Chitsuwa) kutaura nezveNassau neSuffolk Counties, uyezve, vanoshandisa izwi rekuti Guta kureva Manhattan chete. Zvakare kutaura, "Long Island" inogona kureva zvese kuchitsuwa chikuru uye zvakapoteredzwa zvinodzivirira zvitsuwa. Kuchamhembe kwechitsuwa ichi ndeLong Island Sound, mhiri uko kune Westchester County, New York, uye nyika yeConnecticut. Mhiri kweBlock Island Ruzha kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva ndiyo nyika yeRhode Island. Kumadokero, Long Island yakaparadzaniswa neBronx uye chitsuwa cheManhattan neEast River. Kuenda kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero, inopatsanurwa kubva kuStaten Island uye nyika yeNew Jersey neUpper New York Bay, iyo Narrows, uye Lower New York Bay. Kumabvazuva kune Block Island-inova chikamu cheHurumende yeRhode Island- nezvitsuwa zvidiki zvakawanda. Chitsuwa chakareba kupfuura zvese uye chihombe muUnited States, Long Island inosvika makiromita zana namakumi masere kumabvazuva kubva kuNew York Harbor kuenda kuMontauk Point, ine chinhambwe chakakwirira kuchamhembe-kumaodzanyemba kwemakiromita makumi matatu nematanhatu pakati peLong Island Inzwi uye Atlantic coast. Nenharaunda yenzvimbo yemakiromita 1,401 akaenzana (3,630 km2), Long Island ndicho chiwi chikuru chegumi nemana muUnited States uye chiwi chi149th pakukura pasirese - chakakura kupfuura chiuru chemakiromita 1,214 (3,140 km2) yedunhu diki reUS. , NeCensus-inofungidzirwa huwandu hwevanhu vanokwana 7,869,820 muna2017, vanoumba vangangoita makumi mana muzana yevagari veNew York State, Long Island ndicho chitsuwa chine vanhu vakawanda munzvimbo ipi neipi yeUS kana nharaunda, uye chiwi chine vanhu vakawanda pasi rose ( pamberi peIreland, Jamaica, uye Hokkaidō). Huwandu hwehuwandu hwayo huwandu hwevanhu 5,595.1 vagari pamakiromita mamaira (2,160.3 / km2). Kana Long Island inzvimbo yakaumbwa yakazvimiririra yemadhorobha manhamba, inogona kuve yechina vanhu vazhinji muUnited States; kunyangwe dai yaive nyika yeUS, Long Island yaizotora gumi nenhatu muhuwandu uye kutanga muhuwandu hwevanhu. Long Island ine tsika nemagariro, ine dzimwe nzvimbo dzakapfuma uye dzinodhura muWestern Hemisphere padyo nemahombekombe pamwe nenzvimbo dzinoshanda munzvimbo dzese ina. Sechimbichimbi chekushambadzira nendege, Long Island inogara nhandare nhatu dzeNew York City metropolitan nhandare nhatu dzakabatikana, JFK International Airport neLaGuardia Airport, kuwedzera kune Islip MacArthur Airport; pamwe nenzvimbo mbiri huru dzekudzora traffic traffic, iyo New York TRACON neNew York ARTCC. Mabhiriji mapfumbamwe nematanhatu gumi nematatu (kusanganisira migero yezvitima) anobatanidza Brooklyn neQueens kune mamwe matatu madhorobha eNew York City. Feri dzinobatanidza Suffolk County kuchamhembe kuyambuka Long Island Sound kudunhu reConnecticut. Iyo Long Island Rail Road ndiyo njanji yakanyanya kubhidha mutyairi muNorth America uye inoshanda 24/7. Nassau County vadzidzi vechikoro chesekondari vanowanzoonekera zvakanyanya sevanokunda veIntel International Science uye Engineering Fair uye yakafanana STEM-yakavakirwa mibairo yezvidzidzo. Makambani eBiotechnology uye ongororo yesainzi inoita basa rakakosha muhupfumi hweLong Island, kusanganisira zvivakwa zvekutsvagisa kuBrookhaven National Laboratory, Cold Spring Harbour Laboratory, New York Institute of Technology, Plum Island Animal Disease Center, State University yeNew York kuStony Brook, iyo Nyowani York University Tandon Chikoro cheUinjiniya, iyo Guta University yeNew York, uye Hofstra Northwell Chikoro cheMishonga.